Unofanira kutenga wiricheya yakachipa here? | Karman® Mawiricheya
Unofanira kutenga wiricheya yakachipa here?
It yakakosha iyo kana uchitenga a wiricheya chinangwa chekuda kwayo chakagutswa. Vazhinji vachatarisa mutengo paunenge uchitenga wiricheya kuchengetedza mari asi mukufamba kwenguva, mutengo wakakura pakusarudza mutengo pamusoro unhu. A wiricheya yemhando yepamusoro chido mutengo zvakawanda uye nekudzoka zvinopa zvakakura zvinobatsira. Pane zvinhu zvakati wandei zvekutarisa uchitenga wiricheya izvo zvinokanganisa sarudzo yako.
Izvo zvepamusoro zvinhu zvitanhatu zvekutarisa kana uchitenga a wiricheya kuona kuti vanhu vanoita sarudzo chaiyo ndeiyi:
Sarudza Mamiriro acho
Rudzi rwe ezvinhu murwere anokwanisa kuona kana a wiricheya iri sarudzo, kutanga nayo. Vazhinji vanogona kubatsirwa kubva wiricheya asi zvinosuwisa kana zvichikanganisa iyo kugona kushandisa iyo wiricheya zvakanaka kuva nazvo rubatsiro. Izvi zvinotadzisa munhu kuita nemaoko anotungamirirwa wiricheya kuti mumwe munhu anogona kusunda. Pane rimwe divi, kana mamiriro usakanganisa mashandiro eiyo wiricheya pane zvingasarudzwa zvekutora kubva.
kana mamiriro yemunhu ndeyechigarire kana chenguva refu-zvingave zvakanaka kune mari kune kugadzirwa kunzvenga mutengo wakakwirira mukufamba kwenguva. Kana zvakachipa wiricheya iri mikana yakatengwa ndiyo unhu yefuremu, zvinhu, kana zvemagetsi hazvigare kwenguva yakareba uyezve kutenga kwekuwedzera kunodiwa kana mari yekugadzirisa ichawedzera. Kana iyo mamiriro ari kwenguva pfupi a wiricheya inodhura inogona kutariswa asi pane chimwezve chinhu chekufunga nezvacho pamberi.
Iyo nguva yekushandisa zuva nezuva yakakosha kufunga nekuti nyaradzo kana tekinoroji izvo zvinodaro kuvandudza mamiriro akaita Karman Healthcare mawiricheya unogona kuva mutsauko pakati kupuruvha kana zvakakomba mhedzisiro senge musana, Musipinha kuiswa, uye kurasikirwa kwesimba.
Indoor / Kunze
Nzvimbo iyo murwere achange ari kushandisa ari wiricheya iri zvakare zvakakosha chinhu chekufunga nezvacho. Izvo zvakasiyana mhando mavhiri ayo munhu anogona kusarudza kubva ane mweya, yakasimba, kana yakati sandara yemahara iyo ine zvinangwa zvakasiyana. Mavhiri akakora uye akavezwa akanakira kushandiswa kwekunze nekuti anotendera iyo mavhiripu kushandiswa pane dzakawanda nzvimbo. Kune rimwe divi, mavhiri matete uye akatsetseka anozove akanakira kushandiswa kwemukati.
Chinyorwa / Magetsi
Mawiricheya emagetsi zvakanakira avo vane chigaro chenguva dzose kana chenguva refu chisingavabvumidze kuti vazvimisikidze sezvo chichirerutsa basa rezuva nezuva uye kudzivirira kuneta kana uchinge uchitenderera. A wiricheya yemawoko inofanirwa kutariswa kana paine mubatsiri aripo yakawanda yenguva uye kana iyo mamiriro isn'' Kukanganisa kushanda.
Kurema kweiyo wiricheya chiri zvakakosha kutaurwa kwekutarisa sezvo kuchikanganisa iyo kufamba kana zvirizvo rinorema uye wiricheya yemawoko. Chimwe chikonzero kurema kweiyo wiricheya chakakosha ndechekuti riini kutakura, rubatsiro rwekuwedzera runogona kudikanwa kusimudza uye kuchengeta iyo wiricheya.
Kuenderana ndeye chinhu chakakosha kufunga nekuti kana ichigara ichienda uye ichichengeterwa mumotokari ichaita kuchengetedza mhepo. Mawiricheya mazhinji haukwanise kupeta kuti ukwane mutraki yemota kuti uwane zvinhu seizvi zvinogona kubatsira. Inobatsirawo kuchengeta pamba kana isiri kushandiswa uye kuda inoda nzvimbo diki yekuchengetera.
Ndeapi mamwe emawiricheya emagetsi akanaka?